China CNC ny router Manufacturer, OEM, ODM - CHENcan CNC
Naorina tamin'ny taona 1998
CHENcan® dia iray amin'ireo lehibe mpitarika endrika CNC mpamatsy vahaolana ao Shina, manome tanteraka tady 5-Axe CNC Machining Foibe, CNC Mills, CNC router, ary Printers 3D. Fa ny 22 taona, efa nanolo-tena ho fanomezana iray amin'ireo faran'izay tsara-Cost-Taham CNC machining vahaolana ho an'ny mpanjifa. Amin'ny manodidina ny 200 mahay manam-pahaizana, 18.000 ㎡ ny famokarana toerana, ary ISO 9001 rafitra fitantanana tsara laza, dia manolotra avo-tsara CNC machining vahaolana amin'ny vidiny takatry ny vola.
5-Axe CNC Machining Center - Gantry Movi ...
5-Axe CNC Machining Center - Table Movin ...
Chencan M1325A CNC Wood ny router Machine for Sale ...
Marketing sampan-draharahan'ny: tompon'andraikitra amin'ny fampivelarana mety ho mpanjifa. Tongasoa eto amin'ny hifandray aminay raha liana amin'ny 5 mpiray cnc foibe, cnc ny router, bobongolo cnc foibe, RV ankapobeny dingana kobany foibe, ranon-dra sy ny milina fanapahana tamin'ny laser fibre fanapahana milina. Isika dia manome vahaolana tsara indrindra.
7day anatin'ny fomba amam-panao eo an-toerana satria ny fangatahany fahazoan-dalana: raha ny cnc ny router ny faritra rehetra manana olana, isika, dia hiova izany maimaim-poana. Mihoatra ny 7 andro izay fomba amam-panao eo an-toerana ny fangatahany fahazoan-dalana fa ao anatin'ny fe-potoana 12 volana fiantohana: raha misy olana cnc
Anisan'ireo natoky Industry Leaders
Professional R & D ekipa: ny karazana matihanina injeniera, afaka planina sy mamokatra 5 mpiray cnc milina, RV foibe fikarakarana ankapobeny kobany, lehibe bobongolo cnc foibe sy ireo fomba amam-panao farany ambony-fitaovana ...